အလှအပ | The World of Pinkgold
Category Archives: အလှအပ
Posted on November 23, 2009 by cuttiepinkgold
ဒီရက်တွေမှာ အလုပ်ကလေး နည်းနည်းရှုပ်နေတာကြောင့် ဘာပိုစ့်မှတော့ အသစ်မရေးဖြစ်ဘူး။ ဘာမှ Update မလုပ်ပဲ ကြာကြာထားရင်လည်း မကောင်းလို့ အရင်ရေးပြီးသား အဟောင်းလေးတစ်ချို့ကို ပြန်လည်တူးဆွ ဆားချက်မိပါတယ်။
အခု ဆောင်းရာသီရောက်လာပြီ။ မြောက်ပြန်လေကလည်း ဆော်ကာသွေးလာပြီ။ လေနုအေးတွေနဲ့အတူ အသားအရေတွေကလည်း အေးစက်ခြောက်သွေ့လာပြီး။ ဒါကြောင့် အသားအရေ ထိမ်းသိမ်းနည်းပို့စ်လေးတစ်ချို့ကို ပြန်ဖတ်မိပြီး စာဖတ်သူတွေကိုလည်း သတိထားမိစေချင်တာကြောင့် ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။
အလုပ်တွေ နည်းနည်းပါးသွားရင် အသစ် အသစ်သော အရာများနဲ့အတူ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ လာဖတ်ကြတာ ကျေးဇူးပါ။
Posted on July 4, 2009 by cuttiepinkgold
ကျောက်မျက်ရတနာတွေ ၀တ်ဆင်မှုဟာ လူကြိုက်များတဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက နှစ်သစ်စွာ ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြသလို နောက်နောင်မှာလည်း ဒီရေစီးကြောင်းဟာ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရတနာတွေကို နှစ်သက်တတ်ကြပြီး နှစ်သက်စွာ ၀တ်ဆင်လိုတတ်ကြတဲ့ အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ရွှေ ဆိုတာကတော့ ရတနာတွေ အားလုံးထဲက လူကြိုက်အများဆုံး အနှစ်သက်ဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ မတည်ငြိမ်မှုဟာ အမျိုးသမီး တော်တော်များများအတွက် ၀ယ်ယူဝတ်ဆင်ဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွှေကို အမျိုးမျိုးသော သတ္တုများနဲ့ ရောစပ်ပြီး precious jewelry အဖြစ် အသွင်ပြောင်း ၀တ်ဆင်လာကြတာဟာလည်း ခေတ်သစ်ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လို့လာပါတယ်ရှင်။ ရွှေကို ငွေ၊ စတီလ်း အစရှိသော သတ္တုများနဲ့ ရောစပ်ပြီး Accessories များအဖြစ် ပြောင်းလဲ ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တီထွင်ပြောင်းလဲမှုဟာ အသစ်ကြိုက်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအတွက် ပိုမိုနှစ်သက်စရာ တစ်ခုဖြစ်သလို ရွှေအစစ်ကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ၀ယ်ယူဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်လို့လာပါတယ်။ သတ္တုတွေနဲ့ ရောစပ်ပြီး အရောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ ရွှေတွေထဲက လူကြိုက်အများဆုံး အရောင်တွေကတော့ အဖြူရောင် (White Gold) ၊ အ၀ါရောင် (Yellow Gold) တွေနဲ့ ပိုတန်ဘိုးရှိပြီး နည်းနည်းလေးလည်း ရှားပါးတဲ့ ပန်းရောင်ရွှေ (Pink Gold ) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေ ဆိုတာလည်း လူကြိုက်များတဲ့ အ၀တ်အထည်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဈေး တက်လာတာနဲ့အမျှ ငွေထည်ပစ္စည်းတွေကလည်း ဈေးကွက်ထဲမှာ ရွှေလိုပဲ တန်ဘိုးထားဝတ်ဆင်လာကြတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ ဈေးကြီးတဲ့ ရွှေရဲ့ အစားထိုး ပစ္စည်းအဖြစ် ငွေထည်တွေကို တန်ဘိုးထားဝတ်ဆင်လာကြပြန်တော့လည်း ငွေထည်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ ရွှေလိုပဲ တရိပ်ရိပ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရတနာဈေးကွက်မှာ စတီလ်းထည်တွေဟာ နာမည်ကောင်းရလာတဲ့ သတ္တုတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ စတီလ်းထည်တွေဟာ ခိုင်ခန့်တယ်၊ လှပတယ်၊ ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းလည်း ချိုသာပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရွှေနဲ့ ငွေကို ရောစပ်နိုင်သလိုပဲ.. စတီလ်းဟာ ရွှေနဲ့ အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့အတွက် လူကြိုက်များလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပုလဲတွေကတော့ တောက်ပတဲ့အသွင်နဲ့ လှပတဲ့ ရတနာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုလဲတွေကို ဆွဲကြိုး၊ လော့ကတ် အစရှိတဲ့ အဆင်တန်ဆာအဖြစ် ၀တ်ဆင်လာကြတာဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွေမှာ ပိုမိုခေတ်စားလာပါတယ်။ ပုလဲတွေထဲမှာတော့ ဆင်စွယ်ရောင်က နာမည်အကြီးဆုံး လူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်ပြီး အခြားအရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ ပုလဲတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်ရှင်။ ပန်းရောင်၊ အညိုရောင်၊ ရွှေရောင်၊ မီးခိုးရောင် အနက်ရောင်တွေဟာ လူကြိုက်များတဲ့ အရောင်မျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားကတော့ ၄ မီလီမီတာလောက်မှ ၁၂ မီလီမီတာ လောက်အထိရှိတဲ့ ဆိုဒ်မျိုးကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အရောင်တွေ စုံတဲ့အပြင် ပုံသဏ္ဍန်စုံတဲ့ ပုလဲမျိုးကိုလည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကို ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ကြီးမား လေးလံတဲ့ ပုတီးစေ့တွေကို ဖက်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ ၀တ်ဆင်လာကြပါတယ်။ သစ်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပုတီးစေ့တွေဟာ အရင်တုန်းက နာမည်ကြီးခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်ထဲ ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ သန္တာ၊ နဲ့ အခြားကျောက်မျက်မျိုးကို ပိုနှစ်သက်လာကြပါတယ်။ ပုတီးတွေနဲ့အတူ ဒီဇိုင်းဆန်းတဲ့ ဆွဲပြားခပ်ကြီးကြီးတွေဟာလည်း Fashion Trend တစ်ခု ဖြစ်လို့လာပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာ ထပ်ပြီး ရေပန်းစားလာတာကတော့ လက်ကောက်ကြီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်နဲ့ စတိုလ်ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားရမယ့် အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နားဆွဲတွေ နားကပ်တွေကလည်း ဖန်စီတွေထဲမှာ အတော်လေးကို Popular ဖြစ်လာပါတယ်။ နားဆွဲတွေကို ဒီဇိုင်း ဆန်းတေးတွေ ၀တ်ဆင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စတိုလ်တစ်မျိုးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
Filed under အလှအပ |	6 Comments
Posted on May 7, 2009 by cuttiepinkgold
The History of Mascara: Ancient Beauty
အီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာ မျက်တောင်ကော့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အစောဆုံးသုံးတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီစီ ၃၄၀၀ လောက်ကတည်းက စတင်သုံးစွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဆင်စွယ်တွေကို မျက်တောင်ကော့ဖို့ အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မျက်တောင်ကော့စေဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ မီးကျောင်းချေးရယ်၊ ပျားရည်ရယ်၊ ရေ ရယ်ကို ရောစပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာ သူတို့မျက်ခမ်းတွေကို လိုင်နာဆွဲတဲ့အခါ ကာချယ်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေ ယုံကြည်တာက မျက်လုံးတွေဟာ စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ တံခါးပေါက်တွေဖြစ်ပြီး နတ်ဆိုးမိတ္ဆာတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို တားဆီးနိုင်တယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ရှင်။ အီဂျစ်ယောင်္ကျားတွေလည်း မိန်းမတွေနည်းတူ မျက်တောင်တွေ ကော့ကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ် မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ ကလီယိုပါထရာကတော့ မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေနဲ့ ခန္ဒာကိုယ်မှာ ဆေးခြယ်တာတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရော၊ အခမ်းအနားပွဲတွေအတွက်ကော၊ စစ်ပွဲတွေအတွက်ကော၊ ဈာပန အခမ်းအနားတွေအတွက်ပါ ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
The Birth of the First Mascara Product
၁၈၇၂ ခုနှစ်လောက်မှာ ရေနံဂျယ်လီကို mascara တွေတီထွင်ဖို့အတွက် အရေးအပါဆုံး ပစ္စည်းတစ်မျိုးအနေနဲ့ သိသိသာသာကို အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပစ္စည်းကို mascara အတွက်ရောစပ်အသုံးပြုဖို့ စမ်းသပ်ခဲ့တာကတော့ နှစ်အတော်လေးကို ကြာခဲ့ပါတယ်။ Maybelline Cosmetic ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့ Eugene Rimmel က ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှာ ပထမဦးဆုံး လှပစွာ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ရောင်းတန်းဝင် mascara ကို စတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ရေစိုခံတဲ့ မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေသာ မရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်မတို့ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ဒီလို အမျိုးအစားကို သူတို့ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲတွေမှာ၊ တစ်ခြားသော မျက်ရည်လည်ရတဲ့ အခမ်းအနားမျိုးတွေမှာ အသုံးပြုရမှာပါ။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်မှာ ရေစိုခံ မျက်တောင်ကော့ဆေးကို စတင်တီထွင်ခဲ့ပြီး တာပင်တိုင်ကို အဓိကအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ အရေပြားယားယံမှုကို ဖြစ်စေပြီး အနံ့အသက်ကလည်း အတော်လေးကို ဆိုးဝါးပါတယ်။ ရေဆေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတောင် မျက်တောင်မွေးတွေ ကျွတ်ထွက်တာမျိုး ကြုံရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ရေစိုခံ မျက်တောင်ကော့ဆေးကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်များမှာ တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ရှင်။
Why We Wear Mascara
သင့်တော်တဲ့ မျက်တောင်ကော့ဆေးကိုသာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အလှအပကို အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ပြောင်းလဲစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မျက်တောင်တွေဟာ နည်းပါးပြီး ကျဲတောက်တောက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် Read the rest of this entry →
Filed under အလှအပ and tagged beauty, mascara |	2 Comments
Some Tips We Should Know About Lipstick!
Posted on October 30, 2008 by cuttiepinkgold
မိန်းကလေးမှန်ရင်တော့ လှဖို့ ပဖို့ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးပမ်းကြတာ ချည်းပါပဲ။ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး တစ်သသနဲ့ တမမ ဖြစ်နေကြတာဟာလည်း မိန်းကလေးတို့ရဲ့ သဘာဝပဲ မဟုတ်လား။ အချိန်မရှိဘူး၊ မလှချင်ပါဘူးဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ ခေါင်းလေးဖြီးလိုက်၊ သနပ်ခါးလေး လူးလိုက်တော့ လုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ လှချင်တဲ့အကြောင်းကို ပြောနေတာနဲ့ပဲ ပြောစရာကို မပြောရပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ မိန်းကလေး တော်တော်များများဟာ နုတ်ခမ်းအလှကိုလည်း ဖော်ပြတတ်ကြသေးတာမို့ နုတ်ခမ်းနီဆိုတာလည်း မိန်းမတို့အတွက် မရှိ မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က နုတ်ခမ်းနီ မဆိုးပဲ မနေတတ်ကြဘူး။ လှတစ်မျက်နှာဆိုတာဟာလည်း နုတ်ခမ်းနီပါမှ ပြီးပြည့်စုံတာလေ။ ကျွန်မဆိုတဲ့ မိန်းမကတော့ နုတ်ခမ်းနီဆိုးဖို့ကို ဘယ်လိုမှ ဖီလ်းမလာတဲ့ မိန်းကလေးရှင့်။ ပွဲလမ်း သဘင်သွားမှပဲ ခပ်ဖျော့ဖျော့လေး ဆိုးလေးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေး တိုင်းကတော့ နေ့တိုင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတစ်လေပဲ ဖြစ်ဖြစ် နုတ်ခမ်းနီတော့ ဆိုးကြတာ ချည်းပါပဲ။ ကျွန်မတို့ဆိုးနေတဲ့ နုတ်ခမ်းနီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ ရစရာလေးတွေကိုလည်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
နုတ်ခမ်းနီလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ စစချင်းသတိရမိစေတာကတော့ အီဂျစ်လူမျိုးတွေကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာ မိပ်ကပ် cosmetic တွေကို စတင်တီထွင်ခဲ့တဲ့ သူတွေမဟုတ်လား။ နုတ်ခမ်းနီဆိုးဖို့ကိုလည်း သူတို့တွေကပဲ စတင်ခဲ့တာပါ။ အီဂျစ်လူမျိုးတွေနောက်မှာတော့ ဂရိလူမျိုးတွေနဲ့ ဘေဘီလုံတွေက မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းရဲ့ ကနဦးလူသားတွေအဖြစ် ရပ်တည်လို့နေကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေမှာမှ အနောက်နိုင်ငံတွေကို ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ အဲလိဇဘက် ဘရင်မဟာ သူမရဲ့နုတ်ခမ်းတွေလှပဖို့အတွက် မာကျူရီဆာလဖိုဒ်ကို လိမ်းခြယ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမသာမက သူမရဲ့အထိန်းတော် အပျိုတော်တွေကိုလည်း ဒါကိုလိမ်းခြယ်ဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးလေ့ ရှိပါသတဲ့။
နုတ်ခမ်းနီတွေအကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြူ၊ မဲ ရုပ်ရှင်တွေခေတ်က မင်းသမီးတွေကို သတိရမိပါသေးတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ နုတ်ခမ်းဟာ များသောအားဖြင့် မဲနေတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ တစ်ကယ်တော့ဒါဟာ နုတ်ခမ်းတွေ မဲနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးရှင့်။ အနီပုပ်ရောင် နုတ်ခမ်းနီတွေကို ဆိုးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နုတ်ခမ်းနီ ဆိုးလိုက်ရင် မိန်းကလေးတွေဟာ အနည်းနဲ့ အများတော့ sexy အသွင်လေး ဆောင်သွားတတ်ကြတယ်ရှင့်။ အခု ကျွန်မတို့ အသုံးပြုနေကြတဲ့ push-up နုတ်ခမ်းနီကိုတော့ 1915 ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နုတ်ခမ်းနီမှာ မဓိကပါဝင်တာတွေကတော့ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အဆီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နုတ်ခမ်းနီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုးတက်လာမှု အခြေအနေတွေကတော့….
1952: စစ်ကြီးပြီးတဲ့ အချိန်ပေါ့။ Revlon ကုမ္ပဏီက ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံးသော နုတ်ခမ်းနီကြော်ငြာတွေကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူကြော်ငြာခဲ့တာက “Fire & Ice” ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာ တော်တော်များများမှာ နုတ်ခမ်းနီကြော်ငြာတွေကို တွေ့လာရတော့တာပါပဲ။
1957: Gala ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ နုတ်ခမ်းနီဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံးသော tube ပုံစံနုတ်ခမ်းနီ ဖြစ်လာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက နုတ်ခမ်းနီဆိုးဖို့ Brush ကိုသုံးနေမကျသေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ အဲဒီတုန်းက နုတ်ခမ်းနီဆိုးဖို့ကို မိနစ် 20လောက် အချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့လည်း မှတ်သားရပါတယ်။
1958: Max Factor ကပြောတယ်.. နုတ်ခမ်းနီ မဆိုးထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ လူရှေ့သူရှေ့မှာ အ၀တ်ဝတ်မထားတာနဲ့ တူတူပါပဲ… တဲ့။ ခုတော့ မိန်းကလေးတော်တော်များများလည်း နုတ်ခမ်းနီတွေ ဆိုးကုန်ကြလေပြီ။
1959: မာရီလင် မွန်ရိုးပါတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေမှာ မိန်းမတွေဟာ အရောင်အသွေးတောက်ပတဲ့ နုတ်ခမ်းနီတွေဆိုးပြီး ပုရိသတွေကို သွေးဆူအောင် ဖမ်းစားနေလေရဲ့။
1973: Bonne Bell က အရောင် အနဲ့ ထူးခြားတဲ့ lip gloss တွေကို စတင်ရောင်းချပါတယ်။ ခုလက်ရှိ Bonne Bell ကထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်တော့ အဲဒီတုန်းက သူတို့ထုတ်တာ ဘယ်လောက်များ ထူးခြားလို့လဲလို့ မေးလာနိုင်စရာရှိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ lip gloss တွေက တော်တော်လေးကို နည်းသေးတယ်လေ။ အဲလိ်ုနည်းသေးတဲ့ အချိန်မှာ Bonne Bell က အရမ်းကိုရှားပါးတဲ့ စတော်ဘယ်ရိနံ့၊ ဂျယ်လီနံ့တွေလိုမျိုး Lip Gloss မျိုးတွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ခုတော့ လူတွေက Bonne Bell ကထုတ်တဲ့ နုတ်ခမ်းနီတွေကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြတော့ပါဘူး။ တစ်ခြား Brand တွေကိုပဲ အာရုံကျနေတာ များပါတယ်။
1986: မက်ဒေါနားက သူမရဲ့အကြိုက်ဆုံး နုတ်ခမ်းနီဟာ M-A-C’s Russian Red ဖြစ်တယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တော့ မိန်းမ တော်တော်များများ အဲဒါကို လိုက်ဝယ်ကြတော့တာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်က စပြီး နာမည်ကြီးတွေ တစ်ခုခုကြေငြာလိုက်တာနဲ့ လူတွေနောက်ကနေ လိုက်ဝယ်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိလာကြပါတယ်။ ခုချိန်ထိပဲစိုပါစို့။
1996: နုတ်ခမ်းနီအရောင် ဖျော့ဖျော့လေးတွေ ပိုနာမည်ကြီးလာတယ်။ သဘာဝနုတ်ခမ်းသား အတိုင်းလိုမျိုး နုတ်ခမ်းနီရောင် လေးတွေပေါ့။ တစ်ချို့တွေကတော့ နုတ်ခမ်းနီဆိုးတယ်.. ပြီးတော့ တစ်ရှူးတို့ ပေပါတို့နဲ့ ပြန်ဖျက်ပြီး နုတ်ခမ်းနီအရောင် ဖျော့ဖျော့လေးဖြစ်အောင် ထားတတ်ကြသေးတယ်။
2000: Trend ကတော့ တော်တော်ကြီးကို ပြောင်းလဲလာပါပြီ။ အသစ် အသစ်တွေကလည်း ပေါမှ ပေါ ပါပဲ
နုတ်ခမ်းနီတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ဖြစ်တည်မှုလေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ ဆက်လက်ပြီး နုတ်ခမ်းနီ ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် အရောင်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ၊ ဘယ်လိုအမျိုးအစားကို ၀ယ်သင့်သလဲဆိုတာကိုလည်း တစ်ချက်လောက် ကြည့်ကြရအောင်။
1. ကိုယ့်နုတ်ခမ်းသား အရောင်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူတဲ့နုတ်ခမ်းနီကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။ အသားမဲတဲ့ သူတွေကတော့ အနီရင့်ရောင်၊ ၀ိုင်အရက်ရောင်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး အသားဖြူတဲ့သူမျိုးတွေကတော့ ပန်ရောင်၊ အညိုရောင် လိမ္မော်ရောင်လိုမျိုးတွေနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
2. နေ့ဘက်တွေမှာ ပေါ့ပါးပေါ်လွင်တဲ့ အရောင်မျိုးကိုဆိုးပြီး ညဘက်တွေမှာတော့ အရောင်ရင့်ရင့် နုတ်ခမ်းနီမျိုးကို ဆိုးသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နေ့ဘက်တွေမှာ ရိုးရိုး cream နုတ်ခမ်းနီမျိုးက သင့်တော်ပြီး ညနေခင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ gloss လိုမျိုး အရောင်လက်လက်လေးတွေကို သုံးဖို့ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
3. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေဆီသွားပြီး ကိုယ့်နုတ်ခမ်းဟာ ဘယ်လိုအရောင်မျိုးနဲ့ သင့်တော်တယ်ဆိုတာကို စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သဘာဝ အလင်းရောင်ထဲမှာပဲ ကိုယ်ဆိုးထားတဲ့ အရောင်ဟာ ကိုယ်နဲ့လိုကမလိုက် ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
4. အရောင်တွေကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လည်း စပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အရောင်တွေကို ရှာဝယ်လို့ မရနိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
5. နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်နုတ်ခမ်းနီ အရောင်ထက်ရင့်တဲ့ သို့မဟုတ် အရောင်တူတဲ့ lip liner မျိုးကို သုံးရပါမယ်။
6. နုတ်ခမ်းနီ ဆိုးပြီးသွားရင်တော့ Lip Liner လေးဆွဲပြီး အဆုံးသတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေရှင်။
နောက်တစ်ခါ နုတ်ခမ်းနီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် မှတ်သားရန် အချက်ကလေးတွေကတော့..
1. Lip Liner တွေဟာ နုတ်ခမ်းနီ အရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်မှု ရှိရပါမယ်။ ပန်းရောင် နုတ်ခမ်းနီဆိုးပြီး အနက်ရောင် လိုင်နာကြီး ဆွဲတာမျိုးတော့ မလုပ်ရဘူးလေနော်။
2. Brush တစ်ချောင်း အမြဲဆောင်ထားပါ။ နုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့ brush တွေက နုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့အခါ သေသေသပ်သပ် ပြီးမြောက်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သလို နုတ်ခမ်းနီတွေ ဘေးကို မပြန့်အောင်လည်း ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။
3. အသက် 40 ကျော်နေပြီဆိုရင်တော့ Lip Gloss တွေ မဆိုးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ခရမ်လိုမျိုး နုတ်ခမ်းနီတွေကသာ လေးဆယ်ကျော် မမလှလှတွေနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
4. လိမ္မော်ရောင် နုတ်ခမ်းနီတွေကတော့ သင့်ရဲ့သွားတွေကို ပေကျံစေတတ်ပါတယ်။ သွားတွေလည်း အရောင်ပြောင်းပြီး ၀ါသွားတတ်တယ်ပေါ့လေ။
5. နုတ်ခမ်းနီ အရောင်ကို မကြိုက်ရင်တော့ ပါးနီိလိုလည်း စမ်းကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ချို့နုတ်ခမ်းနီတွေဟာ နုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အရောင်မလှပေမယ့် ပါးပေါ်မှာတော့ တော်တော်လေးကို လှနေတတ်ပါတယ်။
6. ပါးနီအဖြစ်ပါ သုံးလို့ မကြိုက်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ တစ်ခြားနုတ်ခမ်းနီ အရောင်တွေနဲ့ ရောစပ်ပြီး ဆိုးကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
7. နုတ်ခမ်းနီတွေဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားရင် အရောင်ကြာရှည်ခံတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Filed under အလှအပ |	12 Comments
Posted on April 23, 2008 by cuttiepinkgold
မိန်းမ တစ်ယောက်ရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် သူဟာ သူ့ရဲ့ အလှအပ အတွက် တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး နာရီဝက်ကနေ သုံး၊ လေး နာရီလောက်ထိ အချိန်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ (တစ်ထိုင်တည်း အချိန်ကြာကြာ အလှပြင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့မှာ မှန်ကြည့်တာ၊ ခေါင်းဖြီးတာ စတာတွေကိုလည်း အလှပြင်တာလို့ မှတ်ယူပါတယ်)။ ဒီဘက်ခေတ်က မိန်းကလေးတွေကတော့ အလှအပထက် စတိုင်လ်ကို အသားပေး ပြင်ဆင်လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ စတိုင်လ်ရှိမှ စတားဖြစ်မယ် ဆိုသလိုပေါ့ရှင်။ ဒီဘက်ခေတ်က အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ မိန်းမပျိုလေးတွေ၊ မော်ဒယ်လ် အစရှိသူတွေဟာလည်း လှဖို့ထက် စတိုင်လ်ကျဖို့ကို ပိုဦးစားပေး ပြင်ဆင်လာ ကြတယ် မဟုတ်လား။ နောက်ပြီးတော့ အမျိုးသမီး တွေအတွက် ပွဲတက်ဖက်ရှင် ဆိုတာလည်း အရေးကြီးလို့ လာပြန်ပါတယ်။ ဒင်နာသွားတာ၊ မိတ်ဆုံစားပွဲ သွားတာ၊ ဧည့်ခံပွဲ အစရှိတာတွေကိုလည်း လူမှုရေးအရ သွားလာနေရတော့ အဲဒါတွေအတွက် ၀တ်ဖို့ စားဖို့ကိုလည်း အရေးတစ်ကြီး ပြင်ဆင်ရပါသေးတယ်။ ကျွန်မ သတိထားမိသလောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာပါ နောက်ပိုင်း ပွဲတက်ဖက်ရှင်တွေဟာ ဂါဝန်တွေပဲ ဖြစ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မလည်း ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဂါဝန်လေးတွေ အ၀တ်အစားလေးတွေ တွေ့ရင် ငါလည်း ပွဲတက်ရင် ဒီလိုဝတ်သွားမယ်လို့ စိတ်ကူးမိဖူးပါရဲ့။ ဒီဇိုင်းတွေကမိုက်၊ cutting တွေကလှ၊ အဲ ဈေးကလည်း မိုက်မှမိုက် ပါပဲ။ ခု ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေကတော့ ကျွန်မ နှစ်သက်မိတဲ့ စတိုင်လ်လေးတွေကို ဖော်ပြထားတာပါ။ လူတစ်ယောက် အကြိုက် တစ်မျိုးပေါ့နော်….
Posted on November 24, 2007 by cuttiepinkgold
မင်္ဂလာဆောင်တွေလည်း များလာ၊ မင်္ဂလာ ရာသီလည်း ရောက်လာပြီဆိုတော့ မင်္ဂလာ ဆောင်ကြမယ့် မမတွေအတွက် wedding hair styles လှလှလေးတွေကို စုဆောင်းရသေလောက် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်……
Vitamin that prevent ACNE!
Posted on October 31, 2007 by cuttiepinkgold
The skin is the body’s largest organ, so what’s good for the rest of your body and health will be good for your skin as well. Maintainingabalanced diet and drinking plenty of water will help you maintain clear skin. Several nutrients and vitamins are known to help with skin biology.
Vitamin A: Retinol is the naturally occurring form of Vitamin A, found in fish oils, liver and dairy products. Vitamin A produced by plants is known as Beta-carotene, and is found in yellow/orange fruits and vegetable such as carrots, yams, apricots and cantaloupe, as well as green vegetables like parsley, kale and spinach. Since Vitamin A isafat soluble vitamin high doses of Vitamin A can be toxic, therefore it is important to monitor the amount of vitamin A that you may intake from supplements.
Vitamin E: Vitamin E isapowerful antioxidant, it protects your cells against the effects of free radicals, which are potentially damaging by-products of the body’s metabolism. Vitamin E not only protects the skin from damage but also helps the immune system and the repair process. Rich natural sources of vitamin E can be found in almonds, sunflower seeds, peanuts, broccoli, wheat germ and vegetable oils.
Vitamin B-2: Stress has been known to aggravate existing cases of acne, and Vitamin B-2 is often helpful alleviating stress and supporting the immune system. Foods withahigh concentration of B-2 include whole grains, fish,milk, eggs, meat and leafy green vegetables.
Vitamin B-3: Vitamin B-3 improves blood circulation thereby promoting healthy skin. It also reduces the cholesterol level in the blood and helps you metabolize protein, sugar & fat. Rich sources of Vitamin B-3 include, peanuts, eggs, avocados, liver and lean meats,
Zinc: Research has shown that people with moderate to severe acne have significantly lower systemic (bodily) zinc levels than people who do not have acne. Zinc is an antioxidant and is also known to boost the immune system. Acne infections destroy collagen and elastin fibers that make up skin. Zinc is frequently called the clean-up enzyme, as it isaco-factor in the removal of damaged tissue caused by acne and other injuries. The healing and repair of acne also requires zinc, and research has shown severe zinc deficiency within in active or chronic acne sites. While zinc is critical to the skin’s immune and repair functions, it also inhibits sebum production.Testosterone in the skin can convert to dihydrotestosterone, which stimulates the production of sebum. The presence of zinc inhibits this conversion and thereby inhibits sebum production. Zinc can be found in eggs, whole grains, nuts and mushrooms.
Supplements should be checked for their iodine content; while normal amounts of iodine have not been shown to affect skin, amounts greater than the RDA of 150 mcg may aggravate your acne.
ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေမှာ ဖူးရွလှပတဲ့ နုတ်ခမ်းလေးတွေ ရှိနေတတ်ကြတာဟာ သဘာဝက မိန်းကလေးတွေ အတွက်ပဲ သီးသန့်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ လက်ဆောင် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ လူတကာ မူး၊ ရူးလောက်စေတဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့်ကို ခြွေပေးတာဟာလည်း ဒီနုတ်ခမ်း လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အသားအရေတွေကို Skin Care လုပ်ပြီး ဂရုစိုက် ပေးကြသလို နုတ်ခမ်းလေးတွေကိုလည်း Lip Care လုပ်ပေးနိုင်ရင် မကောင်းပေ ဘူးလားရှင်။ စိုပြေလှပတဲ့ နုတ်ခမ်းလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ဖို့ အချက်အလက် တစ်ချို့ကို ကျွန်မ တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
နုတ်ခမ်းသား အက်ကွဲခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့
ဆောင်ရာသီမှာ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ နုတ်ခမ်းတွေ အက်ကွဲလာပြီဆိုရင် တစ်ချို့တွေက လျှာနဲ့ပွတ်နေလေ့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ပြသနာကို ပိုလို့ပင် ဆိုးစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ ဒါကြောင့် နုတ်ခမ်းသာ အက်ကွဲတိုင်း ဘယ်တော့မှ တံတွေးနဲ့ စိုစွတ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ Lip Balm တစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုးပေးပါ။ အိပ်ရာဝင်ခါနီး တိုင်းမှာ ဆိုးပေးနိုင်ရင်တော့ နုတ်ခမ်းရဲ့ အစိုဓါတ်ကို ထိမ်းသိမ်းပေးဖို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေချိန်မှာ နုတ်ခမ်းနီ ဆိုးခြင်းကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ရှားစေချင် ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နုတ်ခမ်းနီမှာ ပါဝင်တဲ့ ရောင်ခြယ် ပစ္စည်းတွေကြောင့် နုတ်ခမ်းယားယံခြင်း ဖြစ်စေတတ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နုတ်ခမ်းနီ ဆိုးတော့မယ် ဆိုရင်လည်း Base Coat ကို ဦးစွာဆိုးပေး နိုင်ပါတယ်။ အပြင်တွေဘာတွေ သွားတော့မယ် ဆိုရင်တော့ SPF 15+ လောက်ပါတဲ့ နုတ်ခမ်းနီ မျိုးကို ရွေးချယ် ဆိုးပေးရပါမယ်။
နုတ်ခမ်းသားလေးတွေ အမြဲစိုပြေနေစေဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ moisturizer lotion တစ်မျိုးမျိုးကို အမြဲဆိုးပေးရမှာပါ။
နုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ရဲရဲလေး ဖြစ်နေစေဖို့ အတွက်ကတော့ coriander leaf juice နဲ့ နှိပ်နယ်ပေးရ ပါမယ်။
Filed under အလှအပ |	1 Comment